ओली र नेपालबीच आज दोस्रो वार्ता : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै ओली र नेपालबीच आज दोस्रो वार्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच दोस्रो वार्ता आज पनि हुँदैछ । होटल मेरियटमा दिउँसो २ बजे वार्ता तय भएको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार मोती दुगडले जानकारी दिए । बुधबार पनि मेरियटको कोठा नम्बर ९०१ मा भेट भएको थियो, आज पनि त्यहिँ दोस्रो चरणको भेटवार्ता हुनेछ, दुगडले भने ।
सर्लाही । सर्लाहीमा यतिबेला जंगली बँदेलको चोरी निकासी बढेको छ । स्थानियहरु लकडाउन अवज्ञा गर्दै सयौँको संख्यामा बँदेललाई मार्न जंगल चहारिरहेको दृश्य गाउँ...
बर्दियामा स्थानिय नेता र व्यापारी जुवाखालबाट पक्राउ
Breaking News राजधानी संवाददाता - April 17, 2020 0
बर्दिया । मुलुक यतीखेर लकडानउमा छ । लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्नेलाई साझविहान छाकको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पिरलो छ...
Breaking News राजधानी संवाददाता - May 20, 2020 0
प्रदेश राजधानी संवाददाता - July 21, 2020 0
काठमाडौं । सप्तकोसी नदीमा मंगलबार पानीको बहाव यसै वर्षकै उच्च भएको छ । पानीको बहाब उच्च भएपछि ५६ मध्ये ४८ वटा ढोका खोलिएको छ...
Exclusive राजधानी संवाददाता - January 12, 2021 0
राजनीति राजधानी संवाददाता - May 30, 2020 0
Not-to-be-missed राजधानी संवाददाता - November 20, 2020 0
Breaking News राजधानी संवाददाता - February 27, 2020 0
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबासमा सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीसहित घाइते सबैलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ...
विदेश राजधानी संवाददाता - May 19, 2020 0
खेल राजधानी संवाददाता - December 3, 2020 0
प्रदेश ५ राजधानी संवाददाता - November 26, 2020 0